GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mexican Sign Language Myanmar Nepali Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Quebec Sign Language Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
26 O wee ruo mgbe ihe otiti+ ahụ gasịrị na Jehova gwara Mozis na Elieza nwa Erọn onye nchụàjà, sị: 2 “Gụọnụ nzukọ ụmụ Izrel dum ọnụ malite ná ndị gbara afọ iri abụọ gbagowe, dị ka ụlọ nna ha si dị, bụ́ ndị niile toruru ịga agha n’Izrel.”+ 3 Mozis na Elieza+ onye nchụàjà wee gwa ha okwu na mbara ọzara Moab+ nke dị n’akụkụ Jọdan, n’ebe dị nso na Jeriko,+ sị: 4 “Gụọnụ ha ọnụ malite ná ndị gbara afọ iri abụọ gbagowe, dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu.”+ Ụmụ Izrel ndị si n’ala Ijipt pụta bụ ndị a: 5 Ruben, ọkpara Izrel;+ ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ruben: Ụmụ Henọk+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Henọk; ụmụ Palu+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Palu; 6 ụmụ Hezrọn+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hezrọn; ụmụ Kamaị+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Kamaị. 7 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Ruben. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku iri anọ na atọ, narị asaa na iri atọ.+ 8 Nwa Palu bụ Elayab. 9 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Elayab: Nemuel na Detan na Abaịram. Detan+ na Abaịram+ a bụ ndị a na-akpọ òkù ịbịa nzukọ, bụ́ ndị nọ n’òtù Kora+ wee lụso Mozis na Erọn ọgụ, mgbe ha lụsoro Jehova ọgụ. 10 Ala wee meghee ọnụ ya loo ha.+ Ma Kora nwụrụ mgbe ndị òtù ya nwụrụ, mgbe ọkụ regburu narị ndị ikom abụọ na iri ise.+ Ha wee bụrụ ihe ịdọ aka ná ntị.+ 11 Otú ọ dị, ụmụ Kora anwụghị.+ 12 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Simiọn+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Nemuel+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Nemuel; ụmụ Jemin+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Jemin; ụmụ Jekin+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Jekin; 13 ụmụ Zira bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Zira; ụmụ Sheọl+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Sheọl. 14 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Simiọn: puku mmadụ iri abụọ na abụọ na narị abụọ.+ 15 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Gad+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Zifọn bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Zifọn; ụmụ Hagaị bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hagaị; ụmụ Shunaị bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shunaị; 16 ụmụ Ọznaị bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Ọznaị; ụmụ Iraị bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Iraị; 17 ụmụ Arọd bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Arọd; ụmụ Arilaị+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Arilaị. 18 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Gad. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku mmadụ iri anọ na narị ise.+ 19 Ụmụ ndị ikom Juda+ bụ Ea+ na Onan.+ Otú ọ dị, Ea na Onan nwụrụ n’ala Kenan.+ 20 Ndị a wee bụrụ ụmụ ndị ikom Juda, n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Shila+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shila; ụmụ Pirez+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Pirez; ụmụ Zira+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Zira. 21 Ndị a wee bụrụ ndị ikom Pirez: Ụmụ Hezrọn+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hezrọn; ụmụ Hemọl+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hemọl. 22 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Juda.+ N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku mmadụ iri asaa na isii na narị ise.+ 23 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ịsaka,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Tola+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Tola; ụmụ Puva bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Puva; 24 ụmụ Jeshọb bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Jeshọb; ụmụ Shimrọn+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shimrọn. 25 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Ịsaka. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku mmadụ iri isii na anọ na narị atọ.+ 26 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Zebulọn,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Sired bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Sired; ụmụ Ilọn bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Ilọn; ụmụ Jaliel+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Jaliel. 27 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Zebulọn. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku mmadụ iri isii na narị ise.+ 28 Ụmụ ndị ikom Josef,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ, bụ Manase na Ifrem.+ 29 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Manase:+ Ụmụ Mekia+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Mekia. Mekia wee mụọ Gilied. Ọ bụ Gilied mụrụ ndị ezinụlọ ụmụ Gilied. 30 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Gilied: Ụmụ lza bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ lza; ụmụ Hilek bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hilek; 31 ụmụ Asriel bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Asriel; ụmụ Shikem bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shikem; 32 ụmụ Shemaịda bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shemaịda; ụmụ Hifa+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hifa. 33 Ma Zelofehad nwa Hifa amụtaghị ụmụ nwoke, kama ọ mụrụ ụmụ nwaanyị,+ ụmụ Zelofehad bụ Mala na Noa na Họgla na Milka na Teza.+ 34 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Manase. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku iri ise na abụọ na narị asaa.+ 35 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ifrem,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Shutela+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shutela; ụmụ Bika bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Bika; ụmụ Tehan+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Tehan. 36 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Shutela: Ụmụ Iran bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Iran. 37 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Ifrem.+ N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku mmadụ iri atọ na abụọ na narị ise. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ ndị ikom Josef, n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ 38 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Benjamin,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Bila+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Bila; ụmụ Ashbel+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Ashbel; ụmụ Ahaịram bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Ahaịram; 39 ụmụ Shefufam bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shufam; ụmụ Hufam+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hufam. 40 Ụmụ ndị ikom Bila wee bụrụ Ad na Neaman:+ Ụmụ Ad bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Ad; ụmụ Neaman bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Neaman. 41 Ọ bụ ndị a bụ ụmụ ndị ikom Benjamin,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku iri anọ na ise na narị isii.+ 42 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Dan,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Shuham bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shuham. Ọ bụ ha bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Dan,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 43 Ezinụlọ niile ndị si n’agbụrụ Shuham, bụ́ ndị e debara aha ha n’akwụkwọ, dị puku iri isii na anọ na narị anọ.+ 44 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Asha,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Imna+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Imna; ụmụ Ishvaị+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Ishvaị; ụmụ Beraya bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Beraya; 45 ndị a bụ ụmụ ndị ikom Beraya: Ụmụ Hiba bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Hiba; ụmụ Malkiel+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Malkiel. 46 Aha nwa nwaanyị Asha bụ Sira.+ 47 Ọ bụ ha bụ ezinụlọ ụmụ Asha.+ N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku mmadụ iri ise na atọ na narị anọ.+ 48 Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Naftalaị,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Jaziel+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Jaziel; ụmụ Gunaị+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Gunaị; 49 ụmụ Jiza+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Jiza; ụmụ Shilem+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Shilem. 50 Ọ bụ ha bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Naftalaị,+ n’ezinụlọ n’ezinụlọ. N’ime ha, ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị puku iri anọ na ise na narị anọ.+ 51 Ndị a bụ ụmụ Izrel e debara aha ha n’akwụkwọ: narị puku mmadụ isii na otu, narị mmadụ asaa na iri atọ.+ 52 E mesịa, Jehova gwara Mozis, sị: 53 “Ọ bụ ndị a ka ị ga-ekere ala ahụ ka ọ bụrụ ihe nketa ha dị ka ole aha ha dị. 54 Ndị dị ọtụtụ ka ị ga-ekenye ihe nketa dị ukwuu, ndị dị ole na ole ka ị ga-ekenye ihe nketa dị nta.+ A ga-ekenye ndị nke ọ bụla ihe nketa ha dabere n’ole ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị. 55 Ọ bụ naanị site n’ife nza+ ka a ga-eke ala ahụ. Ha ga-enweta ihe nketa dị ka aha ebo ndị nna ha si dị. 56 Ihe e fetara na nza ka a ga-eji kee ihe nketa n’etiti ndị dị ọtụtụ na ndị dị ole na ole.” 57 Ndị a bụ ndị Livaị+ e debara aha ha n’akwụkwọ, n’ezinụlọ n’ezinụlọ: Ụmụ Geshọn+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Geshọn; ụmụ Kohat+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Kohat; ụmụ Meraraị+ bụ́ ndị ezinụlọ ụmụ Meraraị. 58 Ndị a bụ ezinụlọ ndị si n’ebo Livaị: ezinụlọ ụmụ Libnaị,+ ezinụlọ ụmụ Hibrọn,+ ezinụlọ ụmụ Malaị,+ ezinụlọ ụmụ Mushaị,+ ezinụlọ ụmụ Kora.+ Kohat+ wee mụọ Amram.+ 59 Aha nwunye Amram bụ Jokebed,+ ada Livaị, onye nwunye ya mụụrụ Livaị n’Ijipt. Ka oge na-aga, ọ mụụrụ Amram Erọn na Mozis nakwa Miriam nwanne ha nwaanyị.+ 60 E wee mụọrọ Erọn Nedab na Abaịhu,+ Elieza na Ịtama.+ 61 Ma Nedab na Abaịhu nwụrụ n’ihi na ha surere ihe nsure ọkụ iwu na-akwadoghị n’ihu Jehova.+ 62 Ndị e debara aha ha n’akwụkwọ n’ime ha wee dịrị puku mmadụ iri abụọ na atọ, ndị ikom niile malite ná ndị dị otu ọnwa gbagowe.+ N’ihi na e debaghị aha ha n’akwụkwọ mgbe e debara aha ụmụ Izrel,+ n’ihi na ọ dịghị ihe nketa a ga-enye ha n’etiti ụmụ Izrel.+ 63 Ọ bụ ndị a ka Mozis na Elieza onye nchụàjà debara aha ha n’akwụkwọ mgbe ha debara aha ụmụ Izrel n’akwụkwọ na mbara ọzara Moab nke dị n’akụkụ Jọdan, n’ebe dị nso na Jeriko.+ 64 Ma ọ dịghị nwoke ọ bụla n’ime ndị ahụ Mozis na Erọn onye nchụàjà debara aha ha n’akwụkwọ mgbe ha debara aha ụmụ Izrel n’akwụkwọ n’ala ịkpa Saịnaị+ so ná ndị a. 65 N’ihi na Jehova kwuru banyere ha, sị: “Ha aghaghị ịnwụ n’ala ịkpa a.”+ Ya mere, ọ dịghị nwoke ọ bụla fọdụrụ n’ime ha ma e wezụga Keleb nwa Jefọne na Jọshụa nwa Nọn.+